फूलको माला र अबिर लगाएर स्वागत भई शुरू भएको श्रम
६९०४ पटक पढिएको
जनकपुरधाम, पुस १५ ।
जनकपुरधाममा स्थापना भएको श्रम तथा रोजगार विभागको प्रदेश २ कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरूको श्रम स्वीकृति स्थानीयस्तरमै आजबाट थालेको छ ।
श्रम स्वीकृति गराएका दुई सेवाग्राही हंसपुर नगरपालिका–७ लौवाखोरका जलिल नदाफ र धनौजी बहुअर्वाका जिलानी मोमिनलाई फूलको माला र अबिर लगाएर विभागका महानिर्देशक उदयकुमार गुप्ता, शाखा अधिकृत गणेश श्रेष्ठ र कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार यादवले स्वागत गरेका थिए।
तर सेवा सुरु भएको पहिलो दिनमै प्रदेश २ को श्रम तथा रोजगार कार्यालयको टेलिफोन बिग्रिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति दिने संघीय सरकारको निर्णयबमोजिम आइतबारबाट श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको जनकपुरस्थित सो कार्यालयले दिएको नम्बरमा फोन गर्दा पहिलो दिन नै सम्पर्क हुन सकेन । पहिलो दिन नै ५० भन्दा बढी सेवाग्राही आवश्यक कामका लागि कार्यालय आएका थिए।
श्रम स्वीकृतिको काम प्रदेशमै गराउन पाएपछि समय र खर्चको बचत भएको मोमिनले बताए । महोत्तरीबाट श्रम स्वीकृति गराउन आएका मनोजकुमार महतोले काठमाडौंमा खाने, बस्ने र भाडावापत खर्च हुने रु. ५ हजारभन्दा बढी बचत भएको बताए।
कहाँ छ श्रमको कार्यालय? जनकपुरको मुरलीचोक (विद्यापति) चोकदेखि क्याम्पसचोक (एयरपोर्ट) जाने बाटोको बीचमै रहेको अमित टेन्ट हाउसको गल्लीमा पश्चिम पट्टि श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरिएको छ । विभिन्न सँचार माध्यमहरुमा जनकपुरमा श्रम कार्यालय खुलेपनि कहाँ र कसरी जाने भन्ने कौहुल्ता बढेको थियो । आईतबारदेखि विधिवत रुपमा सुरु गरिएको श्रम स्वीकृतिको लागि धनुषाका विभिन्न ठाउँबाट आएका युवकहरुले सेवा लिएका छन् । कार्यालयको फोन नम्बर भने ०४१ ५२०१३५ रहेको छ